Imikhiqizo yezilwane ezifuywayo zensimbi Abahlinzeki kanye Nemboni - China Imikhiqizo yezilwane ezifuywayo zensimbi Abakhiqizi
Isiteshi sikadoti wesilwane esifuywayo sensimbi esinebhodi lophawu
Usayizi: 190cm H.
Idizayini eyenziwe ngokwezifiso, iphakheji, umbala uzokwamukelwa.
Ukhiye wensimbi wekhwalithi ephezulu ne-Dog Leash Hanger
Heha ihuku yokuhlobisa odongeni yanoma yiliphi igumbi.
Ikhwalithi:Yenziwe ngezinto zensimbi ezisindayo.Iqine kakhulu, iqinile, nemininingwane ephelele.Ukuhlolwa kwekhwalithi okungu-100% ngaphambi kokuthunyelwa.
Qeda: Impushana eqinile egcotshwe ngombala omnyama, omhlophe.
Isetshenziswa Kabanzi:Bamba amaleshi enja, okhiye, izikhwama njll.Akuwona nje umklamo wehuku, futhi iwukuhlobisa odongeni.
I-OEM & ODM: Senza yonke imikhiqizo yensimbi eyenziwe ngokwezifiso, futhi nethimba lethu labaklami lochwepheshe lingakha imiklamo ngokombono wamakhasimende.
Impahla yalo mkhiqizo yi-Carbon steel/Stainless steel
Inqubo esiyisebenzisayo i-Laser Cut
Ngosayizi, sinosayizi ojwayelekile futhi siyakwamukela usayizi owenziwe ngezifiso
Imiklamo eyenziwe ngokwezifiso kanye nelogo nakho kuyatholakala
Ukuze Ufake, sisebenzisa ibhokisi elinsundu noma ibhokisi lombala njengoba ukhetha.
Elula ukudla ukudla ngobukhulu ezahlukene izinja namakati.Asikho isidingo sokuthenga okuphakelayo kwezitsha eziningi zezilwane ezinobude obuhlukahlukene.
Izitsha Ezimbili Zezinja: Kunezitsha zensimbi ezingenasici ezi-2 ezikhishwayo, kulula ukuzigeza futhi zilethe inketho elungele izinja ukuze zidle futhi ziphuze ngesikhathi esisodwa.awudingi ukuwela ezandleni nasemadolweni ukuze uhlanze indawo yokudla.
Indawo Yokudla Ephelele: Isitsha sensimbi esimisiwe esimisiwe, sinikeza indawo yokudla ehlanzekile.Lolu hlobo lwepuleti lezinja eziphakanyisiwe lusiza ukukhuthaza ukuhamba kokudla, ukusuka emlonyeni kuya esiswini, futhi ukuphakama okunethezekile kunciphisa ukucindezela kwentamo yenja lapho idla.
Ihlala Isikhathi Eside: Insimbi engagqwali ihlala isikhathi eside futhi iqinile kunezinye izinto ezifana ne-bamboo, ihlala isikhathi eside ukusetshenziswa.
Izitsha zezinja eziphakanyisiwe azikwazi nje ukunikeza indawo yokudlela ehlanzekile nephephile yezilwane ezifuywayo kodwa futhi zigweme kangcono ukungcoliswa kokudla kwezilwane ezifuywayo.Izitsha ezinkulu zezinja zingasiza futhi izinja ukuthi zithathe indawo yokucindezela kwamalunga namathambo, okuyifanele kakhulu izinja ezindala.
Izitsha zezinja eziphakanyisiwe zinganikeza indawo yokudlela ehlanzekile nephephile yezilwane ezifuywayo, ezingagwema kangcono ukungcola kokudla kwezilwane ezifuywayo, futhi izitsha zezinja eziphakanyisiwe zisiza izinja ukuba zithathe indawo yokucindezela kwamalunga namathambo, okulungele kakhulu izinja ezivuthiwe.
Idizayini ebabazekayo ikunikeza umhlobiso wekhaya osesitayeleni
Isisekelo sensimbi esiphakanyisiwe, ubunzima obuncane bentamo yezilwane ezifuywayo lapho udla
Udokotela wezilwane watusa isitsha sensimbi engagqwali sekhwalithi ephezulu, esihlanzeke kalula, simelana namagciwane
Ilungele inja encane nekati
Lesi siteshi sikadoti wezilwane ezifuywayo izinja sinikeza ikhwalithi ephezulu ngenani eliphansi.Isiteshi sethu sezilwane ezifuywayo zezinja sihlanganisa ukungabuni, ukungagqwali, izinga lezentengiso, insimbi ye-Aluminium enamandla amakhulu.Ihlala isikhathi eside, iyasebenziseka, futhi ibonakala kalula
Heha ihuku yokuhlobisa odongeni yanoma yiliphi igumbi.I-Hook Rack & Wall Art, efaka i-Labrador.Yenza isengezo esihle ekhaya lakho noma engadini, noma isipho esihle kakhulu.
isitsha sokuphakela izinja esisezingeni eliphezulu esiphakanyisiwe esisezingeni eliphansi (A)
Isibonisi Esiphethe Umgexo, Ubakaki Wezitshalo Ezilenga Odongeni, Iziphanyeko Zembiza Yezitshalo, Izingwegwe Zokubambi Ezibalulekile, I-Metal Wall Art, Umhleli weHook Key,